विवाह गरेकै दिन यौनसम्बन्ध स्थापित गर्नु ठिक हाे वा हाेइन ? जानी राखाैं - Sabal Post
विवाह गरेकै दिन यौनसम्बन्ध स्थापित गर्नु ठिक हाे वा हाेइन ? जानी राखाैं
के विवाह गरेकै दिन यौनसम्बन्ध स्थापित गर्नु सही हो ? यो प्रश्नले धेरैलाई सताएको हुनसक्छ । हुन त यो आपसी सहमतीमा भर पर्ने कुरा हो तर अरेन्ज म्यारिजमा पुरुषलाई थुप्रै पटक यो कुराले तर्साएको हुन्छ । थाहा पाउनुहोस् सिनियर साइकोलोजिस्ट र म्यारिटल वेलनेस एक्सपर्ट आँचल भटनागरको भनाईः
बुटवल बसपार्कमा गुल्मीका एक युवाको शव फेला
सरकारी गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । क्वारेन्टिनमा महिला…
घटना व्यवस्थापन तथा सिफारिस प्रणाली सम्बन्धी सचेतनामूलक…